4:58 PM အဖြူရောင်နတ်သမီး 19 comments
Posted in: အပျော်တန်း သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဗီဒီယိုပုံရိပ်များ
HTEIN LIN OO said...
ရိုက်ကွက်လေးတွေလည်း လှတယ် ညီမရေ. . .
နောက်ဆုံး နေလုံးနောက်ခံနဲ့ ရိုက်ထားတာလေးကို ပိုပြီး သဘောကျတယ်။
( အကို့ မျက်လုံး အားနည်းနေလို့ စာတွေတောင်မှ အသစ်ထပ် မရေးဖြစ်ဘူး။ ၅ ရက်လောက် ရှိပြီ တင်နေတာ အရင်က ရေးထားတဲ့ အဟောင်းတွေချည်းပဲ။ မျက်ရိုးကိုက်ပြီး မျက်လုံးတွေ ဝါးနေတယ်။ စာတွေတောင်မှ သေချာ လိုက်မဖတ်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ညီမ ဗီဒီယိုလေးကတော့ ကောင်းလို့ ပြူးပြဲပြီး ကြည့်သွားပါတယ်။ )
မမရေ အပျော်ရိုက်ခဲ့တာဆိုပေမယ့် တော်တော်လေးကို ကြည့်ကောင်းပါတယ်... မမအရမ်းလှတယ်..ခွေးလေးကလဲ နွားလှည်းနောက်က တကောက်ကောက်လိုက်တယ်နော်... ပူးတေလဲ နွားလှည်းမောင်းကြည့်ချင်လိုက်တာ... ဒါပေမယ့်နွားလှည်းတခါစီးတာ တခါပြုတ်ကျဖူးတယ်... လှည်းပေါ်က.. :D
နွားလှည်းမောင်းနေတာလဲ ကြည်နူးစရာလေး ..
ဘာမှ မမြင်ရတဲ့ screen အဖြူရောင်ကိုကြည့်သွားတယ် နတ်သမီးရေ
ဟီး ဒီက ကြည့်လို့ မရလို့ပါနော်
အဟမ်းးး အဟမ်းးး ပြောကုန်ကြပြီ မနမ်းရေ မုန့်ဝယ်ကျွေးဖို့ပြင်ထားတော့နော် အဟိ
အင်္ကျီ အနီနဲ့အမည်းစင်းလေး ဘောင်းဘီမဲလေးနဲ့ပုံ ပိုကြိုက်တယ် သမီးကတော့ အဲဒါလေး လှတယ်
ရော် အဲဒါပဲလှတယ် ထင်နေဦးမယ် အကုန်လှပါတယ် သမီးက အဲဒီပုံလေး ပိုကြိုက်တယ် ပြောတာ
သီချင်းလေးကကြိုက်ပြီးသားမို့ ပိုတောင်မိုက်သွားသေးတယ်။း)
ပြီးခါနီး နေဝင်ချိန် ရိုက်ချက်ကတော့ အနူပညာ အမြောက်ဆုံးပါပဲ၊
နွားလှည်းမောင်းနေတာကလည်း၊ အပျော်ရိုက်ထားတာလို့တောင် မထင်ရပါဘူး၊
အညာမြေမှာ လင်းလက်နေတဲ့ ကြယ်လေးတစ်ပွင့်လိုပါပဲ
နွားလှည်းမောင်းတတ်တာကိုပဲ အညာသူ ညီမလေးက တစ်ကယ်ချီးကျူးပါတယ် ..း) အပျော်ရိုက်ထားတာ ဆိုပေမယ့် တစ်ကယ်ကို အမှတ်တရလေးနဲ့ ကဗျာဆန်နေခဲ့တယ်နော်
ရောက်လည်းရောက်ဖြစ်ပါတယ်..။ တိတ်တိတ်လေး သီချင်းနားထောင်ပြီး ပြန်ပြန်သွားလို့
စိတ်ညစ်နေလို့အစ်မရယ်... မိန်းကလေးတွေ ဘယ်အချိန်မှာ ယောက်ျားလေးတွေရှေ့ ငိုတတ်ကြလည်းဟင်...?
နတ်သမီးရေ... အလုပ်တွေရှုပ်နေတာလား.. နေမကောင်းလို့လား... အသစ်ရေးဦးလေ.... c-box မရှိလို့ ဒီကနေပဲ လာအော်ရတာနော်.... :D
ချစ်တဲ့ နတ်သမီး မမနမ်းမဝ လေး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေနော်..
နွားလှည်းတော့စီးဖူးတယ် မမောင်းဖူးသေးဘူး...။ နတ်သမီးလှလှတစ်ယောက်နွားလှည်းမောင်းတာတွေ့တော့မှ မောင်းကြည့်ချင်စိတ်ပေါ်သွားတယ် ...။ ဒီတစ်ခါ နတ်သမီးပြန်ရောက်ရင် ရွာဘက်သွားပြီး နွားလှည်းသွားမောင်းခိုင်းမယ်...။ သီးချင်းလည်းကောင်းတယ် ရိုက်ချက်လည်းမိတယ်...နတ်သမီးလည်းလှတယ်..။
အမှတ်တ၇ ၇ိုက်ထားတာဆိုပေမဲ့ ..၇ိုက်ချက်တွေ လှတယ်ဗျာ.
သတိတရနဲ့ စာတွေလာဖတ်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
ဟုတ်ကဲ့..စီဘောက်မတွေ့လို့ပါ..။ခုမှဒီဆိုဒ်လေး ကိုရောက်ဖူးတာမို့အခုပဲလင့်ချိတ်ထားမလို့ယူသွား လိုက်ပါတယ်နတ်သမီးမမရေ။ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်